कपिलको परिवारकै कमाई गिन्नीले चढ्ने कार बराबर पनि थिएन, फेरी कसरी भयो विवाह ? – Sandesh Press
कपिलको परिवारकै कमाई गिन्नीले चढ्ने कार बराबर पनि थिएन, फेरी कसरी भयो विवाह ?
January 9, 2022 236
एजेन्सी । कमेडियन कपिल शर्मा नेटफ्लिक्समा रिलिज हुन लागेको आफ्नो पहिलो स्ट्यान्ड अप स्पेशललाई लिएर चर्चामा छन् । यस स्ट्यान्ड अप स्पेशलका केही प्रोमोहरू बाहिर आएका छन्, जसमा कपिलले आफ्नो ट्विटको विवादमा खि ल्ली उडाएको देखियो।
एकातिर कपिलको हाँसो हाँस्ने खालको छ, तर कहिलेकाहीँ उनको पुरानो दिनको कुरा आउँछ, तब मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ कि कपिलले यो सफलतासम्म पुग्न निकै मेहनत गरेका छन् । पत्नी गिन्नी चतरथसँगको प्रेमकथामा पनि कपिलको आर्थिक अवस्था बा ध क बनेको थियो ।
एक अन्तर्वार्तामा कपिल शर्माले गिन्नीसँगको आफ्नो प्रेम र संघर्षका दिनहरु सम्झाए । भनिन्छ, ‘गिन्नी गर्ल्स कलेजमा थिइन्, जालंधरमा ग्रेजुएशन गरिरहेकी थिइन्, मभन्दा ३, ४ वर्ष जुनियर थिइन् र म को एड कलेजमा, कमर्सियल आर्ट्समा पीजी डिप्लोमा पढ्दै थिएँ।
पकेट पैसाको लागि, म थिएटरहरू जान्थें र अन्य कलेजहरूमा जान्थें। उनी मेरो धेरै राम्रो विद्यार्थी थिइन्। हो, अब बिहेपछि उनी मेरो शिक्षिका भइन् । उनी स्किट्स र हिस्ट्रिओनिक्समा राम्रो थिइन्, त्यसैले मैले उनलाई मेरो सहायक बनाए।
त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि म्याडमले मलाई मन पराउन थालेकी छिन्, त्यसैले मैले उनलाई बुझाएँ कि तिमी बसेर आएको गाडीको मुल्य मेरो पूरै परिवारको आम्दानी भन्दा बढी छ। त्यसैले हामीबीच यो सम्भव छैन । कुनै समय पैसाको अभाव देखेका कपिलले आज करोडौं कमाइ गरिरहेका छन् । उनले कडा मिहिनेत गरे र आज टिभी दुनियाँमा कमेडीको बादशाह बनेका छन् । उनले गिन्नी चतरथसँग विवाह गरे र दुवै दुई सन्तानका अभिभावक हुन्। सत्य के हो भने समय सबैको एकनास हुदैन ।
कपिल शर्माको स्ट्यान्ड अप स्पेशलको कुरा गर्दा यो २८ जनवरीमा रिलिज हुँदैछ । शोको टिजर नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको छ । जसमा कपिलले २०१६ मा आफ्नो ट्वीटमा जोक्स गरेका थिए । शोको टिजरबाट कपिलको स्ट्यान्ड अप कति रमाइलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि फ्यानहरु पनि निकै उत्साहित छन् ।
Prevमाघ १५ गतेसम्म स्कुल, व्यापारिक क्षेत्र लगाएत यी ठाउँहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने सरकारको निर्णय निर्णय
Nextटिकटक लाइभले जन्मायो ‘भिखारी सेलिब्रेटी’
साताको पहिलो दिनमै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नेपालमा नै भयो १४ दिनको नवजात शिशुको यस्ताे?
काठमाडौंसहित देशभर फेरि बढ्न थाल्यो घातक वायु प्रदूषण, यी हुन् नेपालका ‘रेड जोन’ शहर